Kazakhstan: Resaky ny mpitoraka blaogy momba ny firaisana fadintseranana sy ny harem-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2010 17:17 GMT
Vakio amin'ny teny русский, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Miady hevitra amin'izay ho azon'i Kazakhstan noho ny Fikambanana anatina fadintseranana iray hiraisany amin'i Rosia, Belarosia ary Kazakhstan, izay hanankery nanomboka tamin'ny 1 Janoary 2010 teo, ireo mpitoraka blaogy. Jeren'ny governemanta ho dingana voalohany hisian'ny fidirana lalina kokoa min'ny Fikambanana ara-toe-karena Eoropeana sy Aziatika ity vondrom-barotra iray iraisan'ny firenena telo ity.
Maro ny manampahaizana no mijery ity fidirana anaty fikambanan ity ho fanapahan-kevitra mety noraisin'ny fitondrana Kazakh, indrindra manoloana ny Hery Ekonomika Sinoa. Ireo tsy resy lahatra kosa miteny fa lasa mampiaka-bidy ny entam-barotra sy ny fandraharahana ataon'ny firenenkafa ny fiarovana ny entam-barotra sy ny fandraharahana Rosiana. Maro no mahita ity dingana ity ho lalam-pamonoana ny vokatra sy ny raharaha vita ao an-toerana, ny hafa kosa milaza fa tsy misy loatra ny fandraharahana ho faty izany.
Grunge Amir dia mihevitra ity fikambanana ara-padintseranana ity ho fiokoana hamotehana an'i Kazakhstan [ru]:
Namidy tamin'i Rosia i Kazakhstan – izany no zava-misy. Tsy miova ny 82 isan-jaton'ny saram-padintseranana no tsy hiova any Rosia, 75 isan-jatony kosa ny any Belarosia, ary 45 isan-jatony ihany no mba tsy hisy fiovany ny any Kazakhstan.
Megakhuimyak dia mihevitra fa mety io zava-mitranga io [ru]:
Ity misy antsipiriany mila lazaina – ny an'i Kazakhstan no ambany indrindra ny saran'ny fadintseranana. Noho izany, mety hisy ampahany amin'ireo orinasa hifindra toerana ho any aminy indrindra ny avy any Belarus.
Thousand-Pa nahatsikaritra ireo tranga tsy fifanarahana voalohany tao anatin'ny firaisana fadintseranana [ru]:
Ahoana ny fahitanao izao? Efa manomboka mampiseho ny fiandoham-pandravan-tena ity Fiarahana Fadintseranana vaovao. Hatrany Rosia mankany Belarosia – “Rehefa tsy misy vola, tsy misy solika”. Any Belarus mankany Rosia – “Rehefa tsy misy solika, tsy misy mitatitra gazy natoraly”. Misimisy ihany ny tabataba momba ity fikambanana iny…
Nandritra izany fotoana izany, dia namaky ireo antontan'isa ofisialy i Epolet ary nanamarika [ru]:
Ny Propagandy dia milaza fa nitombo in-535,5 ny karama tany Kazakhstan hatramin'ny 1993. Nefa, raha mamerina mikajy amin'ny vidin'ny dollars ianao, dia nitombo in-14,3 izany. Mbola izay ihany, na dia ataotsika aza hoe nihena ny sandam-bola dia mbola hita ihany ny fitomboana.
Fa, i torrnado kosa manampy hfa maro ny olona no mahazo kokoa momba ity soritra ity noho ny hafa [ru]:
Mahatratra ny 3 isan-jaton'ny fiharian-karen'ny firenena ny Ny harenan'ny olom-panjakana Kazakhstan taloha iray. Ireo olombitsy nanana faka “Soviet” no mitana ny maro an'isa amin'ny olona 300 mpanankarena indrindra any Soisa. Victor Khrapunov, ben'ny tanànan'Almaty taloha mipetraka any Geneva, dia manan-karena mitentina 300-400 million francs ihany koa.
Tsy misy dikany ny ilazana hoe tsy nanao fandraharahana mihitsy ranamana io fa mpiasam-panjakana nandritra ny andro niainany.
14 ora izayZeorzia